Indlu yeeNdwendwe yaseMadeley Kufuphi neMbali ye-Ironbridge - I-Airbnb
Indlu yeeNdwendwe yaseMadeley Kufuphi neMbali ye-Ironbridge
I-Detached Guesthouse ebekwe kwipropathi kwindawo enamagqabi aseMadeley anendawo yokupaka. Malunga. Imizuzu eli-15 umgama wokuhamba ukuya kwiHistoric Ironbridge kunye nemizuzu eli-10 umgama wokuqhuba ukuya eTelford Shopping/Business Centre. Indawo entle ezolileyo kunye nemfihlo enokufikelela ngokulula kwiindlela ezinkulu kunye neendawo ezijikelezileyo.
Ilungele izibini, abahambi bebodwa kunye nabashishini. Ilungele abantu abadala aba-2, kunye nebhedi yesofa kwigumbi lokuphumla (1 omdala okanye abantwana aba-2 abancinci).
Akukho Vans Nceda, izithintelo zokuhlala zikhona. Akutshaywa okanye izilwanyana zasekhaya.
Indlu yeendwendwe evalelweyo ebekwe kwindawo ephambili. Ifakwe kumgama wokuhamba ukuya kwiHistoric Ironbridge (imizuzu eyi-15 malunga) kunye nomgama wokuqhuba ukuya eTelford kwiivenkile kunye neziko leshishini (imizuzu eyi-10 malunga). Isiseko esihle sokuhlola i-Ironbridge okanye ukusebenza kwindawo.
Ifulethi elizimeleyo elinekhitshi (ifriji/isikhenkcezisi kunye newasha/idryer), igumbi lokuhlambela elineshawa, igumbi lokulala elineebhedi ezimbini kunye negumbi lokuhlala; kunye negumbi lokuhlala / lokutyela elinendawo yokulala eyaneleyo kwaye usonge ibhedi yesofa yeendwendwe ezongezelelweyo (1 omdala okanye 2 abantwana abancinci). Kwakhona kufakwe indawo yepatio yangaphandle. I-430 sq ft indawo yangaphakathi kunye nePatio encinci yangaphandle (100 sq ft). Indawo yokupaka phambi kwepropathi.
4.99 · Izimvo eziyi-215
Abanini abahlala kwindlu enkulu baya kuba bekhona ukuze bancede ngokungena kunye nazo naziphi na iimfuno ngexesha lokuhlala.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Madeley